Waa kuwee shaqsiyaadka ku dadaalay in Timo Werner uu u…
(London) 06 Juun 2020. Weeraryahanka kooxda RB Leipzig ee Timo Werner ayaa aqbalay inuu Chelsea ugu biiro heshiis ku kacaya qiimo lacageed dhan 53 milyan oo Gini, isagoo helay balan qaad ah inay siinayaan mushahar gaaraya 180,000 oo Gini toddobaadkii.
Tababare Frank Lampard iyo agaasimaha ciyaaraha kooxda ka dhisan galbeedka London ee Petr Cech ayaa safar gaaban ku tagay dalka Jarmalka si ay Werner heshiiskiisa ay ugu garaacaan kooxaha England kala dhisan ee kula dagaallamayay saxiixiisa.
Laacibka xulka qaranka Jarmalka ayaa sidoo kale bartilmaameed u ahaa kooxaha Liverpool iyo Manchester United, balse waxa uu doortay u dhaqaaqista Stamford Bridge kaddib markii halyeeyada Blues ee Lampard iyo Cech ay dadaal badan galiyeen sidii ay ula xiriiri lahaayeen.
Sida ay ku warramayso Telegraph, Xiddigihii hore ee Chelsea, kuwaasoo hadda maamula kooxda hanatay tartanka Champions League sannad ciyaareedkii 2011-12, ayaa Werner u bandhigay qorshahooda saxiixiisa kaddib iyo sida uu ugu habboon yahay farsamo ciyaareedka Macallin Lampard.
Majaladda Ingiriiska ka soo baxda ayaa intaas ku dareysa in billawgii xiriirka iyo wada hadalka labada dhinac uu soo curtay ka hor inta aysan dunida galin bandowga coronavirus.
Waxaa la rumeysan yahay in Goolhayihii hore ee xulka qaranka Jamhuuriyadda Czech Republic uu ciyaray kaalinta ugu weyn ee ka dhaadhicinta Werner inuu ku soo biiro Chelsea, maaddaama uu luuqadda Jarmalka ku hadlo, sidoo kalena uu la xiriiray aabbaha dhalay 24-jirkan iyo wakiilkiisa.
Si kastaba ha ahaatee, Liverpool ayaa lavatory arkayay inay ahayd kooxda ugu cadcad ee lala xiriirinayay Timo Werner, balse, kooxda uu hoggaamiyo Jurgen Klopp ayaa iska diidday inay bixiyaan lacagaha heshiiskiisa lagu jabin karo oo ah 50 milyan oo Gini.
Halyeeyada kala ah Frank Lampard iyo Petr Cech ayaa waqti guulo xambaarsan la qaatay Chelsea kaddib 10 sano oo ay u wada ciyaarayeen, waxaana ay si wada jir ah ugu guuleystaan saddex horyaal oo Premier League ah iyo tartanka UEFA Champions League oo ay sanadkii 2012 ku hoggaamiyeen in koobka laga soo dajiyo caasimadda England ee London, waxaana doorarkooda kala ah macallinnimada iyo agaasimaha ciyaaraha ay isla kooxdii ay u ciyaareen ka billaabeen xagaagii hore.